Chii chakaitika kuna Binance Exchange uye kana vachiriita kutanga - Blockchain News
Kukadzi 9, 2018 arun
Chii chakaitika kuna Binance Exchange uye kana vachiriita kutanga
Pasinei zvipikirwa, Binance haana kuenda paIndaneti mangwanani. Kupfuura zuva kare, zvekushandisa basa rakatanga pamusoro Stock Exchange, izvo zvinofanira chete kutungamirira “pfupi kuderera negoho,” asi pakupedzisira akamisa basa Exchange uye zvayakapfuura zvishoma ive isingazivikanwi nguva. zuro, Binance CEO Changpeng Jao ​​akanyora musi Twitter kuti paiva zvisingafanoonekwi dzikatadza nokukopa date, uye inoda kuti kunenge yaunonyanya kushandisa zviri Database, izvo achatora maawa akawanda.
pa 8.00 muBerlin, Jao vakataura kamwe zvakare pamusoro mamiriro ezvinhu, achiti Developers vari kuedza yaunonyanya kushandisa nzira nhatu, zvakasiyana mu nokukurumidza: 1-2 maawa, 5 maawa uye 9 maawa azvaitwa. Panguva ino zviri pachena kuti kutsanya nzira havana kushanda. Maererano ichangobva mashoko, ari “chokupedzisira date chivimbo chakasimba” zviri kuitika iye zvino, ari resumption kuti kutengesa zvinotarisirwa pa 15.00 musi Berlin. Muawa imwe pamberi Stock Exchange paIndaneti, vanozvishandisa vachakwanisa kudzima mirairo. Pamusoro pe, chikwata yakazivisa kuti sechiratidzo nokuonga “kuramba rutsigiro”, exchange kuchaderedza basa 0.03% por mutengapwe kusvikira February 24.
Pasinei chokwadi kuti Changpeng Jao ​​rave akataura kuti Exchange is nokungoti chebasa basa, uye vachiramba Hacker kurwisa, Vamwe vanoshandisa vachiri kufunga kuti pane Hack. Zvikuru sei, Mashoko kubva Exchange vakanga achibvunzwa naJohane McAfee, vachiti “hapana kambani vakabvuma kuti Hacker kurwiswa kusvikira rakamanikidzwa.” Manheru apfuura, McAfee akanyora ake Twitter kuti iye “haaedzi kudyara FUD,” asi iye anogamuchira hwakawanda mashoko vane ruzivo pamusoro kugura wemari Exchange. To pambiru wanamatira munhu screenshot, pasi izvo, pasi Binance Logo, exchange zvichipomerwa anobvuma pacharo kuti akashoropodzwa. Uye kunyange zvazvo munhu akatsigira Makafi, zhinji vakapomera crypto nyanzvi pane unsupported mashoko uye dubious uchapupu: “The mufananidzo akatuma nevamwe” yero “boka – saka iwe ratidza chokwadi?”, “Kumbonzwa Photoshop? yakura, “” uri chokumbofanobata nyanzvi. ”
Makafi akaomerera kuti iye “chete anobvunza mubvunzo” uye sezvo chokumbofanobata nyanzvi anoziva kuti “kana kurwisa sei kuitika uye kuedza kudzokera mari havana kutorwa pakarepo, mikana nokupora vavo airarama razero mukati 24 maawa.” zvisinei, Binance CEO, uyo akapindura Tweets zhinji, akati programmer achiri “anovapavhurira FUD”, uye nechokwadi: “Ticharatidza kuti iwe vakarasika.” Achipindura kupomerwa, Binance Hamubvumirwi Tweet pamwe isina kumbobatwa BitCoins uye Ethereum kero:
Kwete kuedza kuparadzira FUD, asi ndakaugamuchira dzakawanda nezvembiri seiyi. Ndiri kungoedza kunzwisisa. Sezvo chokumbofanobata mutsvakurudzi, Ndinoziva kuti zvinogona hacks vari kure zvikuru nyore kugadzirisa kana kuongororwa pakarepo. Days Papera unokudza basa kubudikidza mirairo manitude. pic.twitter.com/u1PL9Z4tGf
— John McAfee (@officialmcafee) Kukadzi 8, 2018
Chii chakaitika kuna Binance Exchange?
2017 akaona explosi ...
Kurambidza crypto advert ...
Previous Post:Canadian crypto Exchange Coinsquare anomutsa $ 30M